Jereo hoe inona no mitranga any am-pianarana ao amin'ny Detention sy ny tantara mampatahotra | Androidsis
Ny fihazonana dia lalao mampihoron-koditra Japoney tsara hahazoana mangatsiaka
Efa elaela no nitazomana anay ary io no fotoana mety indrindra ho an'ity karazana lalao mampihorohoro ity, ary amin'ity tranga ity dia tafiditra tanteraka amin'ny fampihorohoroana Japoney izy ireo. Ny sarimihetsika toa ny "The Scream" dia nahatonga ny sokajy misy antsika manokana ao anatin'io karazana io.
Ary io lalao io ve isika ento daholo izay fihenjanana izay, mozika manodidina ary fotoana maizina kely izay hahatonga antsika hahatsapa ho mangatsiaka amin'ny fotoana maro. Fampihorohoroana japoney iray mankany amin'ny psyche olombelona ary hananantsika avy eo am-pelatanantsika amin'ny finday. Ataovy.
1 Mampihoron-koditra Japoney tsara, fa amin'ny anglisy
2 Lalàna miaramila martiana Taiwaney am-ponja
3 Traikefa iray manontolo amin'ny fampihorohoroana ara-tsaina
Mampihoron-koditra Japoney tsara, fa amin'ny anglisy
Alohan'ny handrosoanao dia ampahatsiahivinay anao fa ny fihazonana am-ponja dia lalao amin'ny teny anglisy. Lazainay izany satria raha tsy fantatrao ity fiteny ity dia aleo mandroso, satria tsy ho hitanao ny momba ny teti-dratsy sy ireo fotoana tsy maintsy hamakianao lahatsoratra kely. Tsy dia betsaka, fa ampy hahatonga anao ho voadona; Ny fahafaha-manao iray hafa anananao dia ny fampiasana Google Lens amin'ny fitaovana hafa ary avy eo handika izay eo amin'ny efijery amin'ny fotoana tena izy.
Miverina any am-ponja isika alohan'ny horohoro japoney tsara indrindra miaraka amin'ny atmosfera sy kofehy iraisana izay mitarika antsika amin'ny mistery sy famahana olana. Izy io dia karazana lalao "teboka ka jereo" izay tsy maintsy ahitantsika ny zavatra liana indrindra eto an-tany. Zahao ny kilasy tsirairay, ireo lalantsara ireo ary alao ny zavatra rehetra ilaintsika amin'ny fotoana iray.
Fitsangatsanganana mampihoron-koditra iray manontolo izay itorian'ilay vavolombelona izay maty nahafaty an'i Dealight ary mbola mampatahotra antsika foana izany mandritra ny andro vitsivitsy. Eto ny fampihorohoroana dia mifamadika amin'ny psikolojika raha oharina amin'ilay voalaza fa madio izy io. Saingy tsy midika izany fa afaka manao akory aza isika manana nofy ratsy ratsy kokoa amin'ny Detention Ary izany amin'ny farany dia ny zava-dehibe (tsy ny nofy ratsy, fa ny traikefa atolony, izay tena tsara).
Lalàna miaramila martiana Taiwaney am-ponja
Na dia tsy Japoney akory no mikasika antsika, satria izy io mifototra amin'ny lalàna miaramila napetraka tany Taiwan Tamin'ny taona 60, dia misy firesahana betsaka momba ny tatsinanana sy ny bodisma. Ny fianatsika dia manomboka amin'ny sekoly iray izay nifohazantsika tampoka nefa tsy fantatsika izay mitranga. Tsy misy olon-kafa ao an-dakilasy, ary rehefa mivoaka ny efitrano fianarana isika dia mahita irery irery amin'ny sekoly iray manontolo.
Ity tantara ity dia manaraka ny singa ara-pinoana mifototra amin'ny kolontsaina sy ny angano sinoa sy taizanean. Ny lalao mihetsika amin'ny 2D miaraka amina toetrantsika mihetsika ny tenantsika amin'ny fipihana ireo zavatra sy singa samihafa eo amin'ny efijery. Raha izany dia mampatsiahy antsika momba ny Distraint, lalao mampihoron-koditra lehibe iray hafa izay vao nisy fanontana faharoa.
Ny fisongadinana iray hafa momba ny fihazonana azy dia ny fampiasana zavamaneno aziatika izay miaraka amin'ny mozika elektronika, lo-fi ary rock, ary manolotra fotoana tena manokana ho an'ny traikefa fa tsy hiaina. Ka ny fametrahana izay noforonina dia mitombo hatrany rehefa mandroso isika ary mahita ny teti-dratsy ifotoran'ity lalao mampihoron-koditra ity.
Traikefa iray manontolo amin'ny fampihorohoroana ara-tsaina
Manery antsika hisintona finday izy io raha tsy hoe manana finday miaraka amin'i Dolby Atmos sy mpandahateny stereo isika, satria miaraka amin'izany mozika izany, izany tontolo izany sy ireo lahatsoratra, na dia amin'ny teny Anglisy aza dia saika azontsika atao ny manondro fa isika dia. alohan'ny iray amin'ireo traikefa mahatsiravina tsara indrindra izay ananantsika amin'ny finday; Afa-tsy ireo voalaza etsy ambony ireo ary mifototra bebe kokoa amin'ny multiplayer an-tserasera sy ny gore madio.
Traikefa iray ihany ny fihazonana am-pananana hankafizanao amin'ny finday ary hanery anao hampiasa Google Lens handika izany. Lazainay izany satria ilay zava-miafina izay mivoaka avy amin'ny lalao voalohany dia mahavita mamandrika antsika ka saika hamela antsika hilentika ao amin'ny sezalma raha mamela ny tenantsika ho voasarika noho io kolotsaina tatsinanana sy ny angano io isika.
Famonjana anao manana izany maimaim-poana avy amin'ny Play Store, na dia afaka mahavita azy aza ianao dia mila ny fandoavana 5,49 euro hananana ireo fizarana rehetra. Lalao mahatsiravina lehibe iray hafa izay mitantana hampiakarana ny kalitaon'ity sokajy ity amin'ny Android. Hanohy toy izao.
Amin'ny teny Anglisy, fa lalao mampihoron-koditra Japoney handentika anao ao anaty tantara iray nentanin'ny taona 70.
Ny tantara sy ny mistery
Ny toerana dia noforonina tamin'ny fomba hita maso sy miaraka amin'ireo zavamaneno aziatika
Hook avy amin'ny dieny izao
Tianay ny lalao hafa toa izao
Developer: 赤 燭 遊戲
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny fihazonana dia lalao mampihoron-koditra Japoney tsara hahazoana mangatsiaka